Gaadiidka Mount Nemrut waxaa ku bixin doona Nidaamka Tareenka ' RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia02 AdiyamanGaadiidka tagaya Nemrut Mountain waxaa bixin doona Nidaamka Tareenka
28 / 10 / 2019 02 Adiyaman, tareenka, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, Headline, TURKEY
gaadiid si buurta nemrut waxaa lagu siin doonaa nidaamka tareenka
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy, “Nemrut muddo dheer ayuu ajandaha haystay wuxuuna weydiiyay mashruuca nidaamka tareenka. Waxaan dardargelinaynaa mashruuca sanadkan. Haddii UNESCO oggolaato mashruucan, waxaan si dhakhso leh u bilaabi doonnaa maalgashi waana hirgelin karnaa. ”
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy, ayaa baaritaan ku sameeyay Adiyaman. Degmadda Kahta ee xarunta dalxiiska ee Karadut Village, kexanka 102-sano jir ah Keziban Shepherd ayaa booqday guriga, isagoo dhunkaday gacantiisa Ersoy, kadibna liiska UNESCO ee Dhaxalka Adduunka ee Nemrut Mountain la helay.
Shirka Nemrut, Wasiirka Ersoy wuxuu lahadlay dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa ajaanibta ah wuxuuna baaray taalada taallada shirkaan wuxuuna xog ka helay maamulada.
Waxaan ka bilaabi doonnaa shaqada nidaamka tareenka ee Nemrut
Wasiir Ersoy, oo ah suxufi, “Sannadka soo socda wuxuu noqon karaa sannadka Nemrut?” Su’aasha ayaa la weydiiyay, “Kama go’aansan karno isaga hadda. Waxaa jira shaqo ku saabsan waxa dhici doona
Su'aasha acak Ma waxaa jiraya wax shaqo ah oo dhanka gaadiidka ah oo loo dirayo Mount Nemrut? Sidaa darteed, mashruuca gaadhiga fiilada lama oggola. Waxaan bilaabi doonnaa ka shaqeynta nidaamka tareenka ee ay UNESCO aqbali karto. Ma ahan maal gashi weyn. Haddii aan qaabayn karno shaqadan oo ay aqbasho UNESCO, waxaan u baahan nahay inaan hirgalinno mashruuc ay aqbali karaan. Waxaan sameyn doonaa daraasad ku saabsan arrintaas
Imtixaannada Xarumaha Taariikhiga iyo Dalxiiska
Isagoo booqanaya meelaha taariikhiga ah iyo dalxiiska ee Adıyaman, Wasiirka Ersoy wuxuu baaray magaaladii qadiimka ahayd ee Arsemia, oo loo yaqaan caasimada xagaaga iyo xarunta maamulka Boqortooyada Commagene, oo ku taal xudduudda degmada Kahta oo ay ka heshay macluumaad maamulada.
Ersoy wuxuu kaloo booqday Karakuş Tumulus, oo ahayd xabaal taariikhi ah oo ay leeyihiin haweenka qoyska boqortooyada Commagene, halkaas oo uu ku soo qaaday sawirro.
Isagoo fiirinaya wasiirka taariikhiga ah ee Cendere Bridge Ersoy, ka dib wuxuu booqday qolalka qabuuraha magaalada qadiimka ah ee Perre ee magaalada Adiyaman.
Wasiirka Ersoy, dib u soo celinta qadiimkii hore ee Kahta Castle ee baaritaannada socda ayaa laga helay wuxuuna la kulmay saraakiisha shirkadda qandaraaslaha.
Nidaamka tareenada cusub ee 2 ayaa lagu rakibayaa Mount Nemrut.
İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training Training and Research Hospital Ray
Gaadiidka Xarunta Farsamada ee Yeşilyurt
Gaadhiga wata ama dameerka raacaya Buur Nemrut
KGM 8. Gobolka Malatya - Elazığ - Pötürge go'itaanka wadada Nemrut Mountain wadooyin badan oo dhisme ah
Kocaoglu Su'aalaha Laga Helo Nidaamka Isgaadhsiinta
Minibus Samsun ayaa bilaabay inay la tartanto nidaamka baska iyo tareenada
Nidaamka tareemada iyo wadada gawaarida waxay ku kulmaan bartamaha magaalada
Mashruuca Nidaamka Tareenka Mountain Nemrut Mountain
Gaadiidka tagaya buurta Nemrut
Buugga Taariikhda ee Cendere